मन घिसिङले त्यागे राज्यले दिएको सबै पद - खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsमन घिसिङले त्यागे राज्यले दिएको सबै पद
मन घिसिङले त्यागे राज्यले दिएको सबै पद
June 22, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, खबर, दार्जीलिङ, मुख्य समाचार 0
दार्जीलिङ, 22 जून।
गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले आज राज्य सरकारबाट पाएका सबै पदहरू त्यागिदिए अनि गोरामुमो पार्टीको केन्द्रिय समितिका साथै सबै भ्रातृ संगठनहरूलाई पनि विघटन गरे। आज खरसाङको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा स्व. सुवास घिसिङको 83औं जन्म जयन्ती पालन गर्दै पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङले यस्तो घोषणा गरे।
उनले आज त्याग गरेका पदहरूमा क्रमैले हिल एरिया डेवलपमेन्ट कमिटीका अध्यक्ष, गत केही दिनअघि मात्रै राज्यले दिएको राज्यमन्त्रीको पद सामेल छन्। यति मात्रै होइन, उनले आज गोरामुमो केन्द्रिय समिति, दार्जीलिङ, खरसाङ, कालेबुङ महकुमा समिति, नारी मोर्चा, युवा मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चालाई पनि विघटन गरेको जानकारी पार्टी नेता निरज जिम्बाले दिएका छन्। उनले आफूलाई पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङले विशेष प्रवक्ताको क्षमता दिएको र यसैको आधारमा उनले आज पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गरेको पनि जानकारी गराए।
उनले भने-हिल एरिया डेवलपमेन्ट कमिटी गोरामुमोको माग थिएन अनि होइन पनि। गोरामुमोको मूल माग वा चाहना हो दार्जीलिङ पहाड़को समस्यालाई स्थायी समाधान गर्न। यसै विषय लिएरनै गत वर्ष दार्जीलिङ पहाड़का राजनैतिक पार्टीहरू र राज्य सरकारमाझ द्विपक्षीय वार्ताहरू पनि भएका थिए अनि ती वार्ताहरूमा राज्य सरकारलेनै स्थायी राजनैतिक समाधानको कुरा उठाएको थियो। तर राज्य सरकारले मुख बुच्चाउनको लागि यस्ता विभिन्न सहुलियतहरू दिइरहेको छ, जुन गोरामुमोले कहिले मागेको थिएन। उनले अझै अघि भने-वर्तमान राजनैतिक स्थितिलाई नियाल्दा एचएडीसी (हिल एरिया डेभलोपमेन्ट कमिटी)-ले जनताको इच्छा पूर्ण गर्नेछैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। यस्ता कतिपय कारणहरूले गर्दा गोरामुमो स्पष्ट शब्दमा बोल्नसक्ने अवस्थामा पनि थिएन। यसको कारण पार्टीमा अन्तरकलह पनि भइरहेको थियो। जसको कारण पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्ने उद्देश्य लिएर पनि पार्टीलाई विघटन गरिएको हो।
उनले राज्यमन्त्रीको पदभन्दा पार्टीको पद ठूलो हो भन्ने बताउँदै अझै अघि भने-मन घिसिङ एचएडीसीका अध्यक्ष र राज्यमन्त्री मात्रै थिएनन्, यसअघि उनी पार्टी अध्यक्ष पनि हुन्। पार्टीका आफ्नै बाध्यताहरू पनि हुन्छन्। यसैबीच, गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले राज्य सरकारले शीघ्र द्विपक्षीय वार्ता बोलाउनुपर्ने पनि माग गरेको पनि जिम्बाले जानकारी गराए। जसमा दार्जीलिङ पहाड़का साना-ठूला सबै पार्टीलाई बोलाउनुपर्ने माग गर्दै कसैलाई छुट्याउनु नहुने माग गरे। उनले भने-दार्जीलिङ पहाड़को लागि स्थायी राजनैतिक समाधान होस् भन्ने विषयलाई लिएर राज्य सरकारले शीघ्र द्विपक्षीय वार्ता बोलाउनुपर्छ। स्मरण गराइन्छ, राज्य सरकारले गोरामुमोलाई हिल एरिया डेवलपमेन्ट कमिटी दिनअघि पार्टी अध्यक्ष घिसिङलाई जीटीएको कार्यकारी सदस्यता पनि दिएको थियो। तर राज्य सरकारको त्यस प्रस्तावलाई मन घिसिङले ठाडै खारेज गरेका थिए। यसअघि राज्य सरकारले गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङलाई उत्तर बंगाल गेम्स एण्ड स्पोर्टस् डेवलपमेन्ट काउन्सिलका उपाध्यक्ष पद पनि दिएको थियो भने गत केही दिनअघि मात्रै उनलाई राज्यमन्त्रीको पद पनि दिएको थियो। यी सम्पूर्ण पदहरू उनले आज आफ्ना आप्पाको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर त्याग गरे।
यसैबीच, एक प्रश्‍नको उत्तरमा जिम्बाले भने-गोरामुमो पार्टीको संविधानले पार्टी अध्यक्षलाई पार्टी विघटन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ, त्यसै अधिकारस्वरूप विगतमा पार्टीका सस्थापक अध्यक्ष आप्पा (स्व. सुवास घिसिङ)-ले पनि दुइपल्ट पार्टी विघटन गरेका थिए।
फेरि जीवित हुनेछन् हमजायगा
कैलाश मानसरोवर यात्राका यात्रीहरूलाई 758 बीआरटीएफले गऱ्यो स्वागत